အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: September 2011
ကဲ ပြောနေကြာတယ်၊ မပြောရင်မကြာဘူး........လာလေ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ....ပြောရင်တော့ သိပ်လွယ်တာ လွယ်လွန်းလို့ ရေးတောင်မရေးချင်ဘူး ဖုန်းနဲ့ပဲ ပြောပြလိုက်ချင်တာ။ အဲ့တော့ လိုတိုရှင်းပဲ ရေးမယ် ကြည့်ကျက်ဘတ် ပြီး အဆင်ပြေသလိုချက်...
နောက်အရေးကြီး ပစ္စည်းတခုကတော့ ကန်စွန်းရွက် (သူတို့ ဘာသာ သူတို့ ဆည်ဆောက်ဆောက် မဆောက်ဆောက် ကန်စွန်းကတော့ စိန ကန်စွန်း ကမှ ပိုကောင်းတယ်။ ရိုးတံ တုတ်လေကောင်းလေပဲ။ ပြီးရင် အနေတော်လေးတွေ သင်ထားပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိရင် ပုံကြည့်။ ဦးကြီးပု လို အဖြူ အမဲ စာအုပ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော် ဒေါ်ချမ်း က ကာလာနဲ့ စိုနေတာ။ ဟွန်း...
ပြီးရင် ခုန က တည်ထားတဲ့ ကြက်ပြုတ်ရည် ကို အရိုးဆယ်ပါ။ အရိုးတွေ ကုန်ရင် ပဲငံပြာရည် အနောက် နည်းနည်းထည်ပါ။ နည်းနည်းနော် မများစေနဲ့ မဲသွားမယ်။ ပြီးတော့ ခုန က ကော်ရည်ဖျော်ထားတာကိုထည့်။ အပြစ်အကျဲ ကိုကြိုက်သလို ချိန်ထည့် ကျဲ ရင် ရေရော (လျှို့ဝှက်ချက်တခုပြောပြမယ် အစကတည်းက ကြက်ပြုတ်ရည် ကို နည်းနည်းဖယ်ထား အရမ်းပြစ်သွားလို့ လိုရင် ရောရအောင်။ ကော်မှုန့် ကို တခါတည်း အကုန်မထည့်နဲ့ အပြစ်အကျဲ ချိန်ပြီး ဖြေးဖြေးလောင်းထည့် မွှေရင် အရေးကြီးတယ် တဘက်တည်းကိုပဲ တသမတ်မွှေပါ မွှေနေတုံးမှာ ခုန က ခလောက်ထားတဲ့ ကြက်ဥ ကိုထည့် အမျှင်မျှင်လေးတွေ ဖြစ်လာမယ်) အပြစ်အကျဲ လိုသလောက် အနေတော်ရပြီဆိုမှ ငရုတ်ကောင်းလေးဘာလေးထည့်။ ရေလည်ထည့်ပြစ်။ ပြီးရင် ဆား အချိုမှုန့် ကြက်မှုန့်ဝက်မှုန့် ထည့်။ ချိုပေါ့ငံ မြည်း။ အိုကေရင် ဆက်မယ်...
ပန်းကန်ထဲ ဟော့သလိုလေးထည့် သေချာလှအောင်ပြင် ခေါက်ဆွဲ ထည့်၊ ကန်စွန်းရွက် ပဲပင်ပေါက်ထည့် ကြက်သွန်မိတ်လေးဖြူး ပြီးတော့ ကြက်သားလေးတွေ တင် အိုကေပြီဆိုရင် ဟင်းရည်ပူပူလေး ကြိုက်သလောက် လောင်းပြီးတော့ လျှာဂျွန်းပြန် ငပိထောင်း ကြက်သွန်ချဉ်တွေ နဲ့ အုပ်လိုက်ရင် ....
Posted by တီချမ်း at 2:44 AM 19 comments: Links to this post
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ NDF ပါတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
အမှတ် (၁၀၃)၊ တိုက်(၃)၊ ဒဂုံလွင်လမ်း၊ သီရိလမ်းနှင့်စပယ်လမ်းကြား၊
မေတ္တာညွှန့်ရပ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
Ph- ၀၁-၅၅၁၆၅၄ ; emailးinfo@ndfmyanmar.com
ကြေညာချက်အမှတ်( ၆ /၂၀၁၁)
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးနှင့် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ
ပညာရှင်အသီးသီးတို့က မိမိတို့၏ သဘောထားများကို ၀ိုင်းဝန်းအကြံပြု
ဤကိစ္စရပ်နှင့််ပတ်သက်၍ ၂၀၁၁ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင်
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၌ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်
ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယင်းအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင်
လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ” ယခုအခါ ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားသော၊
ပြည်သူ့ကိုယ် စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်အသီးသီး
ပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်၏ သဘောထား၊ အဆုံးအဖြတ်၊ အစိုးရအဖွဲ့၏
မူဝါဒအဆုံးအဖြတ်အတိုင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ၀န်ကြီးဌာန အနေဖြင့်
လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု
ပြောကြားခဲ့ကြောင်းကို မီဒီယာများမှတဆင့် သိရှိရပါသည်။
ဤ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိစ္စရပ်သည်
တစ်မျိုးသားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ တနည်းအားဖြင့်
အမျိုးသားရေးကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသဖြင့် လွှတ်တော်၏သဘောထားအဆုံးအဖြတ်
ခံယူရုံမျှဖြင့် လုံလောက်မည်ဟု မယုံကြည်ပါ။ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက်၊
တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ ဖြစ် ကောင်းသော အရာမဟုတ်ပါ။
ဤကိစ္စရပ်ကြောင့် အားလုံးအယူအဆတူညီမျှတ၍ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု
တည်ဆောက်ရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရနိုင်သလို ဤကိစ္စရပ်ကြောင့်
အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ထိခိုက်
စေနိုင်သည်ကိုလည်း အထူးသတိပြုသင့်ကြပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
စက်တင်္ဘာလ(၁၇)ရက်နေ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပင် အမှတ်(၁)နှင့်အမှတ်(၂)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက “ ဒီကိစ္စ ၊ ဒီ issue ကြောင့်
စည်းလုံးညီညွတ်မှုအား ချည့်နဲ့မသွားစေသင့်ပါကြောင်း တင်ပြအကြံပြုအပ်ပါတယ်
” ဟု အလေး အနက်ထား ပြောကြားခဲ့သည်ကို သိရှိရပါသဖြင့်
ဧရာဝတီအရေးသည် အမျိုးသားရေး၊ ဧရာဝတီသည် အမျိုးသားအမွေအနှစ်၊
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်၍
အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုး ကြီးမားလှသည့် ရတနာတစ်ပါးဆိုသည်ကို
မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။ အခြားအမျိုးသားအမွေအနှစ်များကို ထိန်း
သိမ်းစောင့်ရှောက် ကာကွယ်ကြသလို ဧရာဝတီကိုလည်း အမျိုးသားအမွေအနှစ်အဖြစ်
ဘိုးဘေးဘီဘင်မှစ၍ နောက်အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်တို့ထိတိုင်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိ ပါသည်။
စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာတွင် လွှတ်တော်၏ သဘောထားအဆုံးအဖြတ်သာမက မြန်မာပြည်အရေး၊
အမျိုးသားအရေး ဖြစ်ပါသဖြင့် ပြည်သူလူထုအားလုံး၏ ဆန္ဒကို
တိုက်ရိုက်ခံယူခြင်း ( Referendum) နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါကလည်း ဤကြားကာလတွင်
အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားသင့် ပါကြောင်း အလေးအနက်
Posted by တီချမ်း at 1:20 AM No comments: Links to this post
Eleven Media Group ၏ Chairman & CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်
အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဧရာဝတီမြစ်ဟာ ပြည်ထောင်စုရဲ့ သင်္ကေတ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဟာ ပြည်ထောင်စုရဲ့ အစပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းဟာ ပြည်ထောင်စုကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းဟာ နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာသူတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ ပြည်ထောင်စုကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ ဧရာဝတီကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီပွဲကို မတက်ရောက်နိုင်ကြတဲ့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အလွှာအသီးသီး၊ နေရာဒေသအသီးသီး၊ ဌာနအသီးသီး၊ နေရာဒေသအရပ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့ မြန်မာစိတ်ရှိတဲ့ မြန်မာအားလုံးရဲ့ ဧရာဝတီချစ်စိတ်ကို ကျွန်တော်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ အရေးကြုံတဲ့အချိန်မှာ ညီညွတ်လာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ကျွန်တော်ဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာကို အများကြီးဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပဏာမပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခု ပြောကြားခွင့်ရတာကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုပြောကြားမယ့် အကြောင်းအရာက သတင်းမီဒီယာရှုထောင့်ကပဲ ပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာရှုထောင့်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့အသံတွေကို နားထောင်ရတယ်။ သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို နားထောင်ရတယ်။ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းရတယ်။ သမိုင်း၊ ပထ၀ီ၊ အခြေအနေ အရာရာအားလုံးကို သုံးသပ်ရတယ်။ ပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ တတ်ကျွမ်းမှု၊ မိမိတို့ရဲ့ Common Sense နဲ့ ပြည်သူလူထုကို နားလည်အောင် ပြန်လည်ရှင်းပြရတာ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အလုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာအနေနဲ့ အခုလို ပြည်သူလူထုကို တင်ပြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ တင်ပြရတာရှိသလို တစ်ခါတလေမှာလည်း တည့်တည့် Straight forward ပဲ တင်ပြရတာရှိပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးဟာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ တင်ပြတဲ့အခါ Straight forward တည့်တိုးပဲ ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလိုတည့်တိုးပြောတဲ့အခါ ပညာရှင်မဆန်တာပဲဖြစ်စေ၊ သံတမန်မဆန်တဲ့ စကားလုံးတွေပဲ ပါသွားလို့ဖြစ်စေ ရိုင်းပျသလိုဖြစ်သွားရင်လည်း ခွင့်လွတ်ပေးကြဖို့ အားလုံးကို တောင်းပန်လိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ခုနက environmental ရှုထောင့်က တင်ပြသွားတာတွေဟာ အားလုံးပြည့်စုံပါတယ်။ environmental ရှုထောင့်ကနေ ဆင်ခြေရာ ထပ်ရှာစရာအကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နောက်ဆုံး ဘယ်နေရာ ဘယ်ရှုထောင့် ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကလည်း သုံးသပ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးရှုထောင့်က တင်ပြရရင် ကျွန်တော် ခုန ဆရာဦးဝင်းမျိုးသူလည်း ရှင်းပြသွားပါပြီ။ မြစ်ဆုံဟာ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အထွတ်အမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မလိခဆိုတဲ့ မြစ်နဲ့ အင်မိုင်ခလို့ခေါ်တဲ့ မေခမြစ်တို့ ပေါင်းစည်းပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒီမြစ်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီဟာ ကချင်ဒဏ္ဍာရီမှာ အခိုင်အမာပါဝင်ပြီးတော့ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ ဒေသဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို အထွတ်အမြတ်ထားရာ ရွှေတိဂုံကိုမြင်ရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ပြီလို့ ထင်ကြတဲ့အထိ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဖြစ်သလို မြစ်ဆုံဟာလည်း ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ အထွတ်အမြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေကို ကျော်ဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ရွှေတိဂုံဟာ ဘေးမသီရန်မခ ရှိနေခဲ့တာဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အယူအဆမတူသူ၊ ၀ါဒမတူသူ၊ ဘာသာမတူသူ လူမျိုးမတူသူတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းလေးစားလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နာဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တခြားလူမှုရေးရှုထောင့်က တင်ပြလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခုနကပြောတဲ့ ဒူဝါကြီး၊ ကျွန်တော့် အဖေကလည်း ကချင်ဒေသခံပါ။ ဒူဝါကြီးထက် ငယ်ပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်မှာပဲ မွေးဖွားပြီး ကချင်ပြည်နယ်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒူဝါကြီးက ကျွန်တော့်အဖေထက် အသက်ကြီးပါတယ်။ ဒူဝါကြီးရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ကျွန်တော်အများကြီး နားလည်နိုင်ပါတယ်။ CPI ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ရှင်းပြသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီ Dam ဟာ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၈ ထိ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ error တွေကို ထည့်တွက်ရင် ၇ ၊ ၈ ထက်ကျော်ရင် ခံနိုင်ရည်မရှိဘူးလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ငလျင်တွေကို ပြန်ကြည့်ခဲ့ရင် ကချင်ပြည်နယ် ဒါမှမဟုတ် မြစ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ဒေသမှာ ရစ်ခ်ျစတာစကေး ၇.၅ နဲ့အထက် ငလျင်ကြီးသုံးခု ဖြစ်ပွားခဲ့တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငလျင်တွေကတော့ ၁၉၃၁မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ကာမိုင်းငလျင်၊ ၁၉၄၆ မှာဖြစ်တဲ့ တကောင်းငလျင်၊ ၁၉၉၁ မှာဖြစ်တဲ့ ထီးချိုင့်ငလျင်၊ ဒါတောင် ၁၉၉၄မှာ မြစ်ကြီးနားငလျင် လှုပ်သွားပါသေးတယ်။ ရစ်ခ်ျစတာစကေး ၆ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ အချက်အလက်အားဖြင့် ဒီဒေသမှာ ငလျင်ဆိုတာကို ငြင်းပယ်လို့မရတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရာသီဥတုပူ နွေးပြောင်းလဲလာတယ်။ ခုနကလည်း ဆရာဦးထွန်းလွင် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ ဓာတ်သဘောသဘာဝ ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာ ဘာမှငြင်းလို့မရပါဘူး။ အရင်တုန်းက ငလျင်ဆိုတာ ဒီလောက်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး။ ၂၀၀၄ခုနှစ် ဆူမားတြားငလျင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ရစ်ခ်ျစတာစကေး ၈ အထက် ငလျင်ကြီး ၁၀ ခုတိတိလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာ အံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ခုနစ်နှစ်အတွင်းမှာ ရစ်ခ်ျစတာစကေး ၈ ရှိတဲ့ ငလျင်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လှုပ်လာခဲ့ရင်၊ ဒီမြစ်ဆုံဒေသမှာ ထပ်လှုပ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်မလဲ၊ ဒူဝါကြီးအိပ်မပျော်တာကို ကျွန်တော်တို့ အများကြီး ကိုယ်ချင်းစာနာလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သတင်းမီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို တိတိကျကျ ပြည်သူလူထုကို သတိပေးနိုင်တဲ့ဟာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ပါ။ ဘာဘေးအန္တရာယ်မှမရှိဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ချလက်ချနေနိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက် Risk ရှိမယ်။ ဘယ်လောက် Risk မရှိဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်။ အမြင့်ပေ ၅၀၀ ရှိတဲ့ ဒေသကနေကျလာမယ့် စတုရန်းမိုင် ၅၀၀ ရှိတဲ့ ရေလုံးကြီးရဲ့ ဖိအားကြောင့်ရောက်ခဲ့ရင် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရေလှိုင်းကြီးရဲ့ အဆပေါင်း ဘယ်လောက်များစွာရှိမလဲ၊ ဒီလို အိပ်မပျော်တဲ့ ညပေါင်းများစွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် မြစ်ကြီးနားလွင်ပြင်ဒေသက လူသုံးသိန်းကျော်ကို ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်မလဲ။ သူတို့ကိုနေပါလို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုသွားပြောမလဲ မီဒီယာရှုထောင့်ကနေ ခင်များတို့ မပြောင်းပါနဲ့ နေပါ။ စိတ်ချလက်ချနေပါ။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ ဘယ်လိုသွားပြောမလဲ ဒီလိုမပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီဒေသက လူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူတွေ စွန့်ခွာခဲ့ရင် ဒီမြစ်ကြီးနားမြို့ ဘာဖြစ်သွားမလဲ၊ ကချင်ပြည်နယ် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ဟာ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ဒီအထိ ရေရှည်စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေဟာ လှုံ့ဆော်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ပုံကြီးချဲ့ကားနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးအတွက် တကယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်း၊ အမြင်ကို အမြင်အတိုင်း တင်ပြနေတယ်ဆိုတာကို အားလုံး လက်ခံယုံကြည်စေချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု..
ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲမူ ပြောသွားတာ ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ်။ ကချင်လူမျိုး နှစ်သောင်းကျော် ပြောင်းရွှေ့ရတယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီးသာ ချမ်းသာခဲ့ရင်၊ ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံး အကျိုးရှိရင် ကျွန်မတို့ ကချင်လူမျိုးတွေ အနစ်နာခံရကျိုး နပ်ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုး ကျွန်တော်တို့ သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကချင်လူမျိုးတွေ အနစ်နာခံလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီး၊ ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့တုန်း။ CPI ဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာတမ်းမှာ ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီး ပြီးသွားလို့ရှိရင် Industrialize နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက တရုတ်နိုင်ငံကို ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအား သုံးစွဲမှုကိုကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ၁၅၀၀ပဲရှိပါတယ်။ စင်ကာပူဟာ ၅၀၀၀ ရှိပါတယ်။ ထိုင်းဟာ ၁၃၀၀၀ ရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ဟာ ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို နှိုင်းဆကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ အလွန်ဆုံး သုံးနိုင်ရင် တစ်သောင်းကျော်ပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နောက်ထပ် ၁၀နှစ် ၁၅နှစ်နေရင် တစ်သောင်းကျော်ပဲရှိပါတယ်။ ခု ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ဆောက်ဆဲ တည်ဆောက်ဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်က ထွက်အားဟာ အရမ်းများပါတယ်။ အခု တာပိန်(၁)၊ (၂)၊ ရွှေလီ..။ ရောင်းချပြီးတဲ့ဟာ ထောင်ချီနေတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် ၁၅ရာခိုင်နှုန်း ပဲရှိပါတယ်။ ဒီဟာတွေ တရုတ်ပြည်ရောင်းချလိုက်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ မကြာခင်မှာ ရပ်တော့မယ့် ဟတ်ကြီး၊ တရုတ်ပြည်က သဘာဝပညာရှင်တွေ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ရပ်စဲသွားတဲ့ တာဆန်း၊ ခု အိန္ဒိယကကြိုးစားနေတဲ့ ထမံသီ၊ ဒီပမာဏတွေဟာ မြစ်ဆုံနဲ့ စာရင် ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရေအားလျှပ်စစ် အလျှံပယ်ထွက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေရှိပါတယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကလည်း လျှပ်စစ်ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ Industrialize နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆောက်ဖို့ လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှု၊ ခုနက ဆရာဦးဝင်းမျိုးသူလည်း ပြောသွားပါတယ်။ ဆရာပြောသွားတဲ့ အချက်လေးက ပညာရှင်ဆန်ပြီးတော့ သံတမန်ဆန်ပြီးတော့ အင်မတန်သိမ်မွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တည့်တိုးပဲပြောပါမယ်။ CPI ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသွားပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ။ ကျွန်တော် အင်မတန်ရင်နာသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတာ အစက ၃၀။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာဒေါ်လာ ၄၇ဘီလျံရမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှုစာတမ်းမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြီးစိုးက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ၁၇ ဘီလျံရမယ်တဲ့။ တရုတ်က ၁၁ ဘီလျံရမယ်။ This is quite different ။ ဒီအချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာရှုထောင့်ကပြောရရင် ထောက်ပြစရာအချက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဒီလို အဆင့်ဆင့် တွက်ချက်မှုပေါင်း ၃၀၀ ကျော်အရ ဒီလိုမျိုးအဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ပြီးတော့ ၀န်ကြီးဌာနအဆင့်ဆင့်ရော ရှေ့နေချုပ်ရုံးတွေရော တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဒီစီမံကိန်းကို အတည်ပြုခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလို မတွက်တော့ပါဘူး။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သုံးချက်နည်းနဲ့ပဲ တွက်လိုက်မယ်။ ၁၇ ဘီလီယံကို နှစ် ၅၀ နဲ့စားမယ်။ တစ်နှစ်ကို သန်း ၃၀၀ ပဲရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ သန်း ၃၀၀ နဲ့ ဒီလောက် ငြင်းခုံဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်လို့လား။
တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ရမယ်။ မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှာ မေးကြည့်မယ်၊ တစ်နှစ်ကို ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ၊ သန်း ၁၀၀ လောက်အနည်းဆုံးကုန်မယ်။ ဒါမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေးပဲရှိတယ်။ အောက်မှာ ဆုံးရှုံးသွားတာတွေ ကျန်သေးတယ်။ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ မေးစရာမေးခွန်း လုံးဝမလိုပါဘူး။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့က ငါးနှစ်အတွင်းရှာတာ ၁၂ ဘီလီယံရှိပါတယ်။ ကျောက်စိမ်းက ရှာတာ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ငါးဘီလီယံရှိပါတယ်။ .....ဒါတွေကို တွက်ချက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ရေအားလျှပ်စစ်က ဘာငွေမှမလိုပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ သဘာ၀၀န်းကျင် ပျက်စီးခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ၊ ဧရာဝတီပေါ်မှာ အခြေစိုက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေဘ၀၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ဘ၀ ပျက်စီးတဲ့ ဒီစီမံကိန်း ဘာမှမလိုပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်း၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအဆင့် စီမံကိန်းလို လျို့ဝှက်နေစရာတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်၊ မညွတ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ မပြောပေမယ့် လိုအပ်ရင်တော့ ဥပဒေကြောင်းအရ ပြောနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက CPI ကုမ္ပဏီကို ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ မေးခွန်းထုတ်ရမယ့် မေးခွန်းပါပဲ။ BANCA Report ကို ပြည်သူလူထုအများစုကို မချပြခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ တရုတ်ပညာရှင်တွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လုံးဝမဆောက်သင့်တဲ့အကြောင်း တရုတ်အစိုးရကို တင်ပြသွားမယ်၊ CPI ကုမ္ပဏီကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသွားမယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောသွားပါတယ်။ ဒီပညာရှင်တွေဟာ အင်မတန် ပညာရှင်ပီသတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပညာရှင်တွေရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို လျစ်လျူရှုပြီး ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆောက်ခဲ့တာ ၂၁ရာစုရဲ့ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်မှာ သဘာ၀၀န်းကျင်ကို ထိခိုက်ပြီးတော့ မိမိအမြတ်ယူခြင်းဟာ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခြင်းလို့ အတိအလင်း ပါရှိထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ CPI ကုမ္ပဏီရဲ့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ကျွန်တော်တို့ မေးခွန်းထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ။ နောက်တစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ CPI ကုမ္ပဏီကို ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံ ရေရှည်တည်တံ့လာတဲ့ ချစ်ကြည်မှုကို မပျက်ပြားစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးအချင်းချင်း ပူးတွဲယှဉ်သန်လာခဲ့ကြတဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှင်သန်လာတာကို လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ မဖြစ်ပွားစေချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် CPI ကုမ္ပဏီကို ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြန်လည်ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ CPI ကုမ္ပဏီကို ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာက မေတ္တာအထူးရပ်ခံချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီပါ။ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်တဲ့ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများ၊ အကျိုးစီးပွားရရှိပတ်သက်နေတဲ့သူများကိုလည်း အထူးမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမြေ ဒီရေ ပေါ်မှာနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမြေဒီရေနေတဲ့ ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပူးတွဲနေထိုင်ခြင်းပဲ။ နောက်ကိုလည်း ခင်ဗျားတို့နဲ့ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်လေးတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ သွေးကွဲမှုတွေ မဖြစ်ပွားဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ သူတို့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းသွားအောင်အတွက် အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
နောက်ထူးခြားတဲ့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။7Day ဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီသတင်းဆောင်းပါးဟာ သမိုင်းမှာ အမှားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေ နမူနာယူစရာဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု သမိုင်းအမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အဘိုးလုပ်တဲ့သူကို မြင်တောင်မမြင်ရဘဲနဲ့ မြေးဖြစ်တဲ့သူဟာ ဒီအဖိုးလုပ်တဲ့သူရဲ့ သမိုင်းအမှားကြောင့် နစ်နာခံစားပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားခဲ့ရတာကို ဦးစောရဲ့မြေး ပြောပြခဲ့တာ ကျွန်တော် အင်မတန်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ မြေးတင်မဟုတ်ဘူး၊ မြစ်ပါ ကျောင်းသူကျောင်းသားဘ၀မှာ အာဇာနည်နေ့အကြိုမှာ ကျောင်းမတက်ရဲတဲ့ ဘ၀မျိုးရောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကို ကြည့်ရှုရင် သမိုင်းအမှားကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကြောင့်မို့ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီး၊ မြေးမြစ်အထိ ဒီသမိုင်းအမှားကို ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကို သိစေချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့အပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးအနေနဲ့ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေ၊ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အပါအ၀င် သမိုင်းပျက်ကွက်သူတွေမဖြစ်ရအောင် အဓိကထားလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်တွေ့နိုင်တဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေဟာ ဧရာဝတီမြစ်ကို မမြင်တွေ့ရဘဲ ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖျက်ခဲ့တဲ့ ငါတို့အဖိုး၊ ခုနက ဆရာဦးထွန်းလွင်ပြောခဲ့တဲ့ ပုဆိုးနဲ့ထိုင်နေတဲ့လူဟာ ကျွန်တော့်မြေးဖြစ်နေခဲ့ရင်၊ မြစ်ဖြစ်နေခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ သမိုင်းအမှားကို မကျူးလွန်ရုံမဟုတ်ဘဲ သမိုင်းမှာ ပျက်ကွက်သူတွေမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက် နိုင်ငံရေးရှုထောင့်က ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ Eleven Media Group ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် စူပါပါဝါတွေရဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှုမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ စတေးခံရမယ့် နိုင်ငံမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး အနေအထားအရ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်အင်အားကြီးလာတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ထပ် ထိုးထွက်တဲ့နိုင်ငံဟာ အင်ဒိုနီးရှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံရဲ့ အဓိကဦးဆောင်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ အာဆီယံရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၊ ပထ၀ီနိုင်ငံဒေသ အနေအထားအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုဟာ အရမ်းအရေးပါလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ပကတိ အခြေအနေ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ နိမ့်ကျနေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ မဖြစ်မနေ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ရမယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို ၀င်ရောက်မှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လှပမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီလိုပြောခဲ့ပြီးတာနဲ့အညီ အခုသုံးလအတွင်းမှာလည်း အစိုးရအပါအ၀င် အတိုက်အခံအင်အားစုတွေဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်လည်လျှောက်လှမ်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်မတန် ၀မ်းသာစရာကောင်းလို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လှပစပြုနေပါပြီ။ မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်သာ ကြေညာခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် လှပတဲ့ အနာဂတ်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလှပတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းမှာ မြစ်ဆုံပြဿနာဟာ လမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ပြဿနာအဖြစ် ဘယ်လိုမှဖန်တီးလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ မကြာမီဖွံ့ဖြိုးတော့မယ့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမျိုးသားရေးတာဝန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေကို ပထမထုတ်ဖော်ရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒတွေကို သတင်းမီဒီယာတွေက မှတ်ကျောက်တင်ပြီးတော့ ပေးရပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေ မှတ်ကျောက်တင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဒီကိစ္စကို အခြေအတင် ဆွေးနွေးပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ တိုင်ပင်ရပါတယ်။ အစိုးရက ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကို လေးစားတဲ့အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ပြည်သူလူထုဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မှာ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြည်သူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ သတင်းမီဒီယာတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရတို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ တိုင်းရင်းသားပြဿနာလေး ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီမှာ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း အများကြီး တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒူဝါကြီးလည်း ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမလိုပဲ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုအပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ လေးစားပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေကို ခုနကပြောသလို လောပိတဖြစ်ပြီး အင်းလေးဒေသမှာ မီးမလင်းသေးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ် ရှိပြီးတော့ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ မီးမလင်းသေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ဒီလိုဒုက္ခတွေကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ မခံစားစေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတစ်ကျပ်၊ ကချင်တစ်ကျပ်၊ ရှမ်းတစ်ကျပ်။ ကျွန်တော်တို့ ၁၀ ပြားရနေတဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုလည်း ၁၀ ပြားရစေချင်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ပြားမှ မရတဲ့အဖြစ်မျိုးကို ကျွန်တော် အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်က ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောပါမယ်။ ကျွန်တော့်အဖေဟာ ကချင်ပြည်နယ်ဒေသမှာ မွေးဖွားတဲ့ ဗမာလူမျိုး၊ ကချင်နဲ့ ရှမ်းသွေးပါတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အမေက ရှမ်းကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ မဘိမ်းဒေသက ရှမ်းကြီးနဲ့ ဗမာလူမျိုး စပ်ထားတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါကျတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ကရင်၊ ဗမာ၊ တရုတ်သွေးပါတဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်က တရုတ်လူမျိုး မုန်းတာလည်းမရှိဘူး။ ကျွန်တော် ဘယ်လူမျိုးကိုမှ ကျွန်တော့်မှာအစွဲမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်သားက မေးပါတယ်။ အဖေ သားက ဘာလူမျိုးလဲတဲ့။ သားက ပြည်ထောင်စု မြန်မာလူမျိုး၊ ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားရရှိထားတဲ့ မည်သည့်ဘာသာ၊ မည်သည့်လူမျိုးမဆို ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုအပေါ်မှာ ကျေးဇူးသစ္စာစောင့်သိရိုသေတဲ့ လူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စမှာ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အကယ်၍သာ ဒီမြစ်ဆုံကို ဇွတ်အတင်း ဆက်ဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သာ ကချင်လူမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် ဒါဟာ တရားမျှတတဲ့လုပ်ရပ်လို့ ဘယ်တော့မှ တွေးထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သာ ဗမာလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ထက် အင်အားနည်းတဲ့ လူမျိုးတွေအပေါ်မှာ ကျွန်တော်ဟာ အမြဲတမ်း gulity concious ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်ဟာ ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ရင် ကချင်လူမျိုးတွေကို ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ သံသယတွေ ဖြေဖျောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်ရဲ့ သွေးခွဲမှုတွေ၊ ကိုလိုနီလက်သစ်တွေရဲ့ အသုံးချခံရမှုတွေ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်၊ နှစ် ၅၀ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုးတွေအောက်မှာ ကြီးထွားခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုတွေ၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအထင်အမြင်လွဲမှုတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီအခြေအနေမျိုး ရောက်ရှိနေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကွဲခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ ငြိမ်းချမ်းသင့်ပါပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုကွာဟမှု၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မယုံသင်္ကာဖြစ်မှု၊ နိုင့်ထက်စီးနင်းမှုတွေ ကင်းရှင်းတဲ့ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖြစ်သင့်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် သတိထားရမယ့်အချက်က ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ဆိုတဲ့ဟာ အပေါ်မှာ ဒီအချက်ကို လက်ခံဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုတော့ ယူရဦးမယ်ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရော သဘောပေါက်ဖို့ ဒီနေရာက ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ လေ့လာထားသမျှ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ကို လက်ခံပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပူးပေါင်းနေထိုင်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲတဲ့ အမြဲတမ်းထာဝရ ရပ်တည်နေထိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်သွားဖို့ အရမ်းအရေးပါနေတဲ့အချိန် ရောက်နေပါပြီ။ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ၁၉၄၁ ခုနှစ် ရဲဘော်သုံးကျိပ်က ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မေ့ထားလို့လုံးဝမရပါဘူး။ Professional ပီသပြီး ခိုင်မာကျစ်လျစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ လေးစားချစ်ခင်တဲ့ တပ်မတော်ဟာ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်နဲ့အတူ ပူးတွဲပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာ တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တပ်မတော်ဖြစ်တာနဲ့အညီ တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်က ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီအချိန်ကာလဟာ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ဖြစ်ရေးအတွက် အချိန်ယူတည်ဆောက်ရမယ့် ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးခုနဲ့ ကင်းရှင်းပြီး မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးခုကို စောင့်ရှောက်နိုင်တာ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ရှိပါတယ်။ ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့မဏ္ဍိုင် လည်းရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့မဏ္ဍိုင်နည်းတူ ဒီမဏ္ဍိုင်တွေနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း ဆဌမမဏ္ဍိုင်အဖြစ် တပ်မတော်ဟာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီဆိုရင် ဒီမိုကရေစီလည်း ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်လည်း ဖြစ်ထွန်းလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Professional ပီသတဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်အောင်၊ ပြည်သူလူထု လေးစားယုံကြည်တဲ့၊ ပြည်သူလူထု တိုင်းရင်းသားတွေ ချစ်ခင်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတစ်နေ့က ပွဲတစ်ခုမှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ဆုံကနေ ညီညွတ်ရေး အမြတ်ယူရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး အစိုးရအပါအ၀င် ပြည်သူတွေအားလုံး ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၊ ပြည်ထောင်စု တစ်ခုဖြစ်အောင် မြစ်ဆုံကနေတစ်ဆင့် အဖြေထုတ်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အတိတ်ကို ပြန်သွားဖို့ မလိုပါဘူး။ အတိတ်ဆိုတာ သင်ခန်းစာယူရုံပဲ ဆိုတာကလွဲလို့ ကျွန်တော်တို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ထပ်မတွေးစေချင်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြဿနာတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း၊ အေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းသွားဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးအပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေအပါအ၀င် ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝင်တဲ့ တွေ့ဆုံပွဲညီလာခံတစ်ခုကို သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ပြုလုပ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒီညီလာခံဟာ အဖြေတစ်ခု မထွက်နိုင်ရင်တောင် တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကြားမှာ သံသယရှိမှုတွေ၊ ပြည်သူလူထုကြားမှာ အားလုံးပြေပျောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ရှေ့ဆက်သွားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တူတာတွေတွဲလုပ်၊ မတူတာတွေ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းကြမယ့် အနေအထားမျိုးကို ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလုပ်မယ့် ညီလာခံကို ပင်လုံမှာ မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ မြစ်ဆုံမှာ လုပ်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မြစ်ဆုံမှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
Posted by တီချမ်း at 12:43 PM2comments: Links to this post
တီဘလောခ် စရေးကာစ က တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ တနေ့ က ရွှေဇင်ဦး က ၂၃ ရက်နေ့ ကျရင် တခုခု ပြန်တင်ပေးပါ ပြောတာနဲ့ ပြန်ရှာ တင်လိုက်ပါတယ်
Lovechild of May-kha and Mali-kha
Bride of the histories
We own as whole
From the silvery snowy Himalayas
Through the ravines and across the mountains
To the plains she comes
Gently now she streams around Legendary Bagan
(For) Kings may come and Dynasties may go
With unswerving intentions
Is always true to her people
“Crack” – There goes the rice pot of the Delta
Men they come and they go
Trash may ride along her waves
Becoming the Delta we grow nowadays but…
She is… (Still)
She will go on forever;
Flow on forever
Where will the sun set one day?
Somewhere by the river bend
Let us meet by the next river bend
တီ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စာအုပ်အတွက်ရေးပေးတဲ့ကဗျာလေးပါ
တီ အရင်က မြန်မာ လိုလဲရေးဖူးပါတယ် ခုဟာက သူ့စာအုပ်အတွက် မို့လို့ english ရေးပေးတာပါ
စာအုပ် က coffee table စာအုပ်ပါ
မြန်မာလိုပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ယှဉ်ကြည့်ရအောင်ပါ
တီ့ ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာ လိုရေးရတာ ပိုအားရပါတယ်
စကားလုံးရွေးချယ်ရတာ က အစပေါ့လေ
မေခ နဲ့ မေလိခ ကနေ
ဟိုးဖြူဖြူ နှင်းတောင်လွှလွှ ကစလို့
ပုဂံ ကို ပတ်ခွေကာစီးဆင်း
မြစ်ဝ က ဆန်အိုး
Posted by တီချမ်း at 1:40 AM6comments Links to this post
Labels: coffee table booklet, ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ
သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ လက်ရာ ဓါတ်ပုံလေးပါ
သူက ကော်ဖီစားပွဲ ဘုတ်အုပ်တအုပ် (Coffee table book) ထုတ်ဖို့ လုပ်နေတာပါ
တီ တို့ ရပ်ကွက်ထဲက (HIV/AIDS fields) သူနဲ့ ခင်တဲ့ စာတိုပေစ တွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့
သူတွေ ကို အကူအညီတောင်းပါတယ်
နောက်မှ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးပေးလိုက်မယ် စဉ်းစားထားပါတယ်
ဖြစ်မလာရင်လဲ နောက် တပုဒ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
ဒါလေးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုက်လို့ တင်ထားလိုက်ပါတယ်
ရီဂျင်နယ် မှာထုတ်မယ့် စာအုပ်ဆိုတော့ မကောင်းရင် ကိုယ်က အခွက်ရှဲပါမယ်
ပြီးတော့ ပြောမယ်ဆိုရင် ဒါက ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လို
ပထမဆုံးပရင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လေနော် ရီဂျင်နယ်မှာပြောတာပါ
အရင်ကတော့ ဘာဘာညာညာ လေးတွေရှိခဲ့ပါတယ် နောက်များမှ ကြုံရင်တင်ပေးပါမယ်
ကိုငှက် ရဲ့စာတကြောင်းကြိုက်လို့ ယူထားပါတယ်.............း)
ပြည်သူတွေကို မပြောင်းခဲ့တဲ့ သူ့သဘောထား
မြစ်ဝ က ဆန်အိုး ခုတော့ကွဲခဲ့ပေါ့
Posted by တီချမ်း at 2:22 AM9comments Links to this post
Labels: coffee table booklet, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ
Posted by တီချမ်း at 1:29 AM 1 comment: Links to this post
မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ၏ အမျိုး​သား​အ​မွေအနှစ်နှင့်​ အကျိုး​စီး​ပွား​ အား​ပြိုင်မှု
Published on September 21, 2011 by ထက်​အောင်
မြန်မာနိုင်ငံ​မြောက်ဖျား​ပိုင်း​ကစလို့​ လျှို​မြောင်အသွယ်သွယ်ကိုဖြတ်သန်း​ပြီး​ ​မြေဆီဩဇာ​ကောင်း​မွန်တဲ့​ ​တောင်ဘက် မြစ်ဝ ကျွန်း​ပေါ်အထိ ​မြေပြန့်​လွင်ပြင်​တွေကို မိုင်​ထောင်ချီ ​ကွေ့​ပတ်စီး​ဆင်း​နေတဲ့​ မြစ်မဟာ ဧရာဝတီရဲ့​သမိုင်း​နဲ့​ ဒီမြစ်ကြီး​တ​လျှောက် မှီတင်း​နေထိုင်ကြတဲ့​ လူမျိုး​ပေါင်း​စုံရဲ့​ ယဉ်​ကျေး​မှုနဲ့​ လူမှုစီး​ပွား​ဘဝ​တွေကို မြန်မာလူငယ်တိုင်း​ ငယ်စဉ်ဘဝက စလို့​ ​ကျောင်း​သင်ခန်း​စာ​တွေထဲမှာ​ရော ပြင်ပစာ​ပေဗဟုသုတအ​နေနဲ့​ရော သင်ယူ​လေ့​လာ ရင်း​နှီး​ကျွမ်း​ဝင်ခဲ့​ကြပါတယ်။
အခု​တော့​ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး​ မတိမ်​ကော​ရေး​၊​ ထာဝရရှင်သန်စီး​ဆင်း​ရေး​အတွက် မြစ်ဖျား​ဧရာရဲ့​အစ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံ​ဒေသမှာ ကြီး​မား​တဲ့​ရေကာတာတခု တည်​ဆောက်မယ့်​ စီမံကိန်း​ကို ဝိုင်း​ဝန်း​ကန့်​ကွက်ကြ၊​ ​ဆော်ဩကြတဲ့​ အသံ​တွေ မြန်မာပြည်သူ​တွေအကြား​ ကျယ်ကျယ်​လောင်​လောင်ထွက်​ပေါ်လာ​တော့​မှ ​ကျောင်း​သင်ခန်း​စာထဲ ရာဇဝင်ထဲ နှစ်​ပေါင်း​ များ​စွာအိပ်​ပျော်​နေခဲ့​တဲ့​ ဧရာဝတီရဲ့​ ဝိညာဉ်လည်း​ တဖန်ပြန်လည်နိုး​ထလာခဲ့​ပါပြီ။
မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ အပါအဝင် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း​ရဲ့​အထက်ဘက် ​မေခနဲ့​ မလိခမြစ်​ပေါ်မှာ ​ရေကာတာ ၇ ခု တည်​ဆောက်​ရေး​ ကို မြန်မာစစ်အစိုး​ရလက်ထက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်ခန့်​ကစပြီး​ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် China Power Investment Corporation (CPI) နဲ့​ နား​လည်မှုစာချုပ် (MoU) လက်မှတ်​ရေထိုး​ဆောင်ရွက်ခဲ့​ပေမယ့်​ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့​ပတ်သက်လို့​ ဒီလိုစိုး​ရိမ်မှု​တွေ ကျယ် ကျယ်ပြန့်​ပြန့်​ ထွက်​ပေါ်မလာခဲ့​ပါဘူး​။
အခုအချိန်ကျမှ မြန်မာလူထုအကြား​ စိုး​ရိမ်မှု​တွေကြီး​ထွား​ခဲ့​ရတာရဲ့​ အဓိကအ​ကြောင်း​ရင်း​တခုက မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ အပါအဝင် ​မေခနဲ့​ မလိခမြစ်​ပေါ်မှာ တည်​ဆောက်မယ့်​ရေကာတာ ၇ ခု စီမံကိန်း​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပေါ်လာမယ့်​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် အ​ပေါ်သက်​ရောက်မှု (Environmental Impact Assessment – EIA) ကို Biodiversity And Nature Conservation Association (BANCA) သု​တေသနအဖွဲ့​က ကျယ်ကျယ်ပြန့်​ပြန့်​ ကွင်း​ဆင်း​လေ့​လာဆန်း​စစ် အကဲဖြတ်ထား​တဲ့​ အစီရင်ခံစာတ​စောင် မြန်မာပြည်သူ​တွေအကြား​ ​ပေါက်ကြား​ခဲ့​ခြင်း​က စတင်ခဲ့​တယ်လို့​ ​ပြောနိုင်ပါတယ်။
တ​လောကပဲ မြန်မာအစိုး​ရရဲ့​ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်း​အင်ဝန်ကြီး​ ဦး​ဇော်မင်း​က ​နေပြည်​တော်သတင်း​စာရှင်း​လင်း​ပွဲတခု မှာ BANCA ကို အ​မေရိကန်​ဒေါ်လ ၁ ဒသမ ၂၅ သန်း​ပေး​ပြီး​ EIA ကို လုပ်​ဆောင်ခိုင်း​ခဲ့​ကြောင်း​၊​ အင်တာနက်​ပေါ်မှာ ပြန့်​နှံ့​နေတဲ့​ အစီရင်ခံစာနဲ့​ပတ်သက်ပြီး​ “ခင်ဗျား​တို့​ မီဒီယာ​တွေက ​ပြော​နေကြတဲ့​ အချက်​ပေါ့​။ အင်တာနက်မှာ တင်ထား​တဲ့​ report က စာမျက်နှာ ၅၀၀ ​လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ​ရေး​ထား​တာ မြန်မာအစိုး​ရက မလိုက်နာဘူး​လို့​ ​ပြောကြတယ်။ BANCA က ဒီ report ကို တင်လို့​ မရဘူး။ BANCA ကို ကျွန်​တော်တို့​က စာချုပ်နဲ့​ ငှား​ထား​တာ၊​ မင်း​တို့​ ဒါလုပ်၊​ ပြီး​ရင် အဲဒီ report ငါ့​ပေး​။ ဒါက Trade Secret ဖြစ်တယ်၊​ ​ပြောလို့​မရဘူး​” လို့​ ​ပြောခဲ့​ပါတယ်။
ဝန်ကြီး​ဦး​ဇော်မင်း​ရဲ့​အ​ပြော​ကြောင့်​ အင်တာနက်​ပေါ်က အစီရင်ခံစာဟာ အစစ်မဟုတ်သလိုလို၊​ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ​ရေကာတာ စီမံကိန်း​ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး​လုပ်​နေသူများ​က “ဧရာဝတီ​ရောဂါ” ပြန့်​ပွား​အောင်​ဆောင်ရွက်​နေသလိုလို အဓိပ္ပါယ်သက် ​ရောက်​နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ​တွေလက်ထဲ ​ရောက်ရှိ​နေတဲ့​ BANCA ရဲ့​ အစီရင်ခံစာဟာ ဝန်ကြီး​ပြောသလို စာမျက်နှာ ၅၀၀ မဟုတ်ဘဲ အစီရင်ခံစာမျက်နှာဖုံး​က​နေ အဆုံး​အထိ စာမျက်နှာစုစု​ပေါင်း​ ၉၃၅ မျက်နှာရှိတဲ့​ ပြီး​ပြည်စုံတဲ့​ အစီရင်ခံစာတ​စောင်ဖြစ်ပြီး​ ၂၀၀၉ နှစ် ​အောက်တိုဘာလ ရက်စွဲနဲ့​ ထုတ်ပြန်ထား​ခြင်း​ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး​ ဦး​ဇော်မင်း​က ​ဒေါ်လာ ၁.၂၅ သန်း​ အကုန်ကျခံခဲ့​တာ မြန်မာအစိုး​ရဘက်က ​ဆောင်ရွက်ခဲ့​သ​ယောင် ​ပြောဆိုခဲ့​ပေမယ့်​ အစီရင်ခံစာအရ ဒီ​ငွေကို CPI က အကုန်ကျခံခဲ့​တာဖြစ်ပါတယ်။
BANCA ရဲ့​အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ EIA ကို မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရမယ်လို့​ စည်း​မျဉ်း​ဥပ​ဒေ သတ်မှတ်ထား​တာမရှိပါ။ ဒါ​ပေမယ့်​ အခုလို ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း​အထက်ပိုင်း​မှာ ​ရေအား​လျှပ်စစ်ထုတ်ယူ​ရေး​စီမံကိန်း​ကြီး​တွေ ​ဆောင်ရွက်ရာမှာ တရုတ်အစိုး​ရရဲ့​ EIA နဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ စိုး​ရိမ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသင့်​ကြောင်း​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။ မြန်မာအစိုး​ရဘက်ကလည်း​ စိုး​ရိမ်မှုရှိတယ်လို့​ ​ဖော်ပြမထား​ပါဘူး​။ ဒါ​ပေမယ့်​ မြန်မာအစိုး​ရရဲ့​ ပူး​ပေါင်း​ကူညီမှုကို ​ကျေး​ဇူး​တင်​ကြောင်း​ ​ဖော်ပြခဲ့​ပါတယ်။ BANCA က အခုလို ​ရေး​ထား​ပါတယ်။
“EIA is not mandatory yet in Myanmar. However regarding hydropower development of Ayeyawady River above Myitkyina, we should appreciate China’s concern on EIA and should refer their EIA procedure.”
BANCA ရဲ့​ အစီရင်ခံစာမှာ တရုတ်အစိုး​ရရဲ့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​စောင့်​ရှောက်​ရေး​ဥပ​ဒေနဲ့​ ​ဆောက်လုပ်​ရေး​ စီမံကိန်း​များ​ မတည်​ဆောက်ခင် တရုတ်ကုမ္ပဏီများ​က အစိုး​ရကပြဌာန်း​ထား​တဲ့​ EIA ဥပ​ဒေကိုလိုက်နာအ​ကောင်အထည် ​ဖော်ရ​ကြောင်း​ ​ဖော်ပြထား​တဲ့​အတွက် အခု BANCA ရဲ့​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ EIA ဟာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ​တွေဘက်က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့​ ဥပ​ဒေကို လိုက်နာ​ဆောင်ရွက်ဖို့​ တာဝန်ရှိတဲ့​အတွက် လုပ်​ဆောင်တာလား​၊​ မြန်မာအစိုး​ရက မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ ​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပေါ်လာနိုင်တဲ့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ထိခိုက်မှု​တွေအတွက် စိုး​ရိမ်လို့​ ​ဆောင်ရွက်တာလား​ဆိုတာ ​မေး​ခွန်း​ထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့​ဒီအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ရှုလိုက်ရတဲ့​အတွက် မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ တည်​ဆောက်​နေဆဲနဲ့​ တည်​ဆောက်ပြီး​ လတ်တ​လော ကာလမှာပင် ကြီး​ကြီး​မား​မား​ ဆိုး​ကျိုး​သက်​ရောက်မှု​တွေကို ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။ မြန်မာအစိုး​ရရဲ့​ အဆိုအရ ဧရာဝတီမြစ် ​ရေရဲ့​ ၇ % ကိုသာ ဆည်အတွင်း​ သို​လှောင်မှာဖြစ်တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။ BANCA ရဲ့​ GIS (Geographic Information System) တိုင်း​ထွာချက်အရ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာရဲ့​ ​ရေမျက်နှာပြင်အကျယ်ဟာ ဧက ၆၄,၇၈၄ (၂၆,၂၃၈ ဟက်တာ) ရှိမှာဖြစ်တဲ့​အတွက် ​ရေ​အောက်နစ်မြုပ်သွား​မယ့်​ ​မြေဧက ၆၄,၇၈၄ ​ကြောင့်​ လတ်တ​လောကြုံ​တွေ့​ရမယ့်​ ဆိုး​ကျိုး​တွေက -
(၁) ​ကျေး​ရွာ​ပေါင်း​ ၃၂ စု ​ရေနစ်မြုပ်သွား​မှာဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့​ ​ဒေသခံသတင်း​အချက်အလက်​တွေကို ကိုး​ကား​ပြီး​ အဆိုပါ​ရေနစ်မြုပ်သွား​မယ့်​ ​ကျေး​ရွာ​ပေါင်း​ ၃၀ ​ကျော်က အိမ်​ထောင်စု​ပေါင်း​ ၅,၀၀၀ ခန့်​၊​ လူဦး​ရေ ၈,၀၀၀ ခန့်​ အိုး​မဲ့​အိမ်မဲ့​ ဖြစ်သွား​လိမ့်​မယ်လို့​ ​ဖော်ပြထား​တယ်။ အခြား​လေ့​လာမှုတခုကိုလည်း​ ကိုး​ကား​ပြီး​ BANCA က ​ဖော်ပြရာမှာ ​ရေနစ်မြုပ်မယ့်​ ​ကျေး​ရွာ​ပေါင်း​ ၄၇ ရွာ အထိရှိနိုင်တယ်လို့​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
ရေနစ်မြုပ်သွား​မယ့်​ကျေး​ရွာများ​ကို BANCA က ​အောက်ပါအတိုင်း​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
“According to our GIS map analysis, the following villages will be flooded.
Tang Hpe; Te Yan Zup; Naing Sein; Nget Pyaw Daw; Zup Ra Yang; Sa ni to yang; Kwin Htau; Tang Bauk Yang; The waing; N Bum Yaung; U Ship Yang; Bum Rung; La Zup; Hkam Be Yang; Bum Lai; N Dawng Yang; Daw Man Yang; Ma Jang Yang; Ka Pyi Kawng; Kh Wa Yang; Tum Pang; Ma Li Yang; Au Ra Yang; U Laung Yang; Man Tawng; Shi Ngaw; Brm Ba; N Sawp Zup; N Jip; Hkat Pwa Hmaw; Zai ro (Za ru).”
(၂) ​မေခမြစ်တ​လျှောက် ​ဖောက်လုပ်ထား​တဲ့​ မြစ်ကြီး​နား​-ချီ​ဗွေ ကား​လမ်း​ရဲ့​ ၄၆ ကီလိုမီတာရှည်လျား​တဲ့​ လမ်း​ပိုင်း​တခုလုံး​ ​ရေနစ်မြုပ်သွား​မှာဖြစ်သလို ဒီလမ်း​ပေါ်မှာ တည်​ဆောက်ထား​တဲ့​ ၅၉ မိုင် တံတား​၊​ ရှ​ဂေါ်တံတား​တို့​လည်း​ ပျက်စီး​နစ်မြုပ် သွား​မှာဖြစ်တယ်။
(၃) မလိခမြစ်တ​လျှောက် ​ဖောက်လုပ်ထား​တဲ့​ မြစ်ကြီး​နား​-ပူတာအိုကား​လမ်း​ရဲ့​ ၄၈ ကီလိုမီတာခန့််​ရှည်လျား​တဲ့​ လမ်း​ပိုင်း​တခုလုံး​လည်း​ ​ရေနစ်မြုပ်သွား​မှာဖြစ်သလို ဒီလမ်း​ပေါ်မှာ တည်​ဆောက်ထား​တဲ့​ အင်ဇူး​တံတား​၊​ တိန်ဇူး​တံတား​နဲ့​ အခြား​ တံတား​ငယ်များ​လည်း​ ပျက်စီး​နစ်မြုပ်သွား​မှာဖြစ်တယ်။
(၄) ကချင်လူမျိုး​တွေအတွက်ပါမက မြန်မာတနိုင်ငံလုံး​ရဲ့​ ယဉ်​ကျေး​မှုအမှတ်လက္ခဏာတရပ်ဖြစ်ပြီး​ သာယာလှပတဲ့​ မြစ်ဆုံ​ဒေသ ထာဝရ​ပျောက်ဆုံး​သွား​မှာဖြစ်သလို ကချင်ပြည်နယ် ခရီး​သွား​လုပ်ငန်း​ဖွံ့​ဖြိုး​မှုအတွက် ဆုံး​ရှုံး​မှုကြီး​တရပ် ဖြစ်သွား​ပါလိမ့်​မယ်။
(၅) စိုက်ပျိုး​နိုင်တဲ့​ လယ်​မြေဧက ၁၈,၀၀၀ ​ကျော် ဆုံး​ရှုံး​မှာ ဖြစ်သလို သစ်​တောများ​နဲ့​ သဘာဝရင်း​မြစ်​တွေဖြစ်တဲ့​ အပင်မျိုး​စိတ်​တွေနဲ့​ ဇီဝမျိုး​စိတ် အများ​အပြား​ ဆုံး​ရှုံး​ပျက်စီး​မှာဖြစ်ပါတယ်။
BANCA ဟာ EIA ကိုသာ ​ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့​အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ပျက်စီး​ဆုံး​ရှုံး​မှုများ​ကို အဓိကထား​လေ့​လာခဲ့​ပြီး​ အခုတင်ပြခဲ့​တဲ့​ အ​ခြေခံအ​ဆောက်အအုံပိုင်း​ဆိုင်ရာနဲ့​ မြစ်ဆုံ​ဒေသမှာ မှီတင်း​နေထိုင်ကြတဲ့​ ပြည်သူ​တွေရဲ့​ လူမှုစီး​ပွား​ဘဝ အ​ပြောင်း​အလဲနဲ့​ နစ်နာဆုံး​ရှုံး​မှု​တွေကို မ​လေ့​လာခဲ့​ပါဘူး​။ အဲဒီအတွက် မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပေါ်လာနိုင်တဲ့​ လူမှုစီး​ပွား​ဘဝအ​ပေါ် အကျိုး​သက်​ရောက်မှု (Social Impact Assessment – SIA) ကို မဖြစ်မ​နေ လုပ်​ဆောင်ဖို့​ လိုအပ်​ကြောင်း​ကို အဲဒီအစီရင်ခံစာမှာ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
BANCA ပြုလုပ်ခဲ့​တဲ့​ EIA ဟာ မြစ်ဆုံရဲ့​ အထက်ဘက် ​မေခနဲ့​ ​မေလိခ ​ရေ​ဝေကုန်း​တန်း​တ​လျှောက် လုပ်​ဆောင်ခဲ့​တာဖြစ်ပြီး​ ဆည်တည်​ဆောက်ပြီး​ပါက မြစ်​အောက်ဘက်မှာ ဖြစ်​ပေါ်နိုင်တဲ့​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် အ​ပြောင်း​အလဲအတွက် ​လေ့​လာမှုများ​ မပါဝင်ပါ။ ထို့​အတူ SIA ကိုမဖြစ်မ​နေ ​ဆောင်ရွက်ဖို့​ အကြံပြုခဲ့​တာဟာလည်း​ ​ရေကာတာ​ကြောင့်​ ဆုံး​ရှုံး​နစ်နာသွား​ကြမယ့်​ မြစ်ဆုံပတ်ဝန်း​ကျင်ကိုသာ ရည်ညွှန်း​ပြောဆိုခဲ့​ဟန်ရှိပြီး​ ဆည်တည်​ဆောက်မှု​ကြောင့်​ ဖြစ်​ပေါ်လာနိုင်တဲ့​ မြစ်​အောက်ဘက်မှာ​နေထိုင်ကြတဲ့​ ပြည်သူ​တွေရဲ့​ လူမှုစီး​ပွား​ဘဝကို ထိခိုက်နိုင်​ခြေကို ​လေ့​လာဖို့​ အကြံပြုမထား​ပါဘူး​။
ရင်း​မြစ်။ ။ BANCA ရဲ့​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ​ကြောင့်​ ​ရေလွှမ်း​သွား​မယ့်​နေရာ​တွေကို အပြာ​ရောင်နဲ့​ ပြသထား​ပုံ
အခုအချိန်အထိ ရှင်း​လင်း​ပြောဆိုခဲ့​တဲ့​ အချက်အလက်​တွေကို မြန်မာပြည်သူ​တွေထဲက BANCA အစီရင်ခံစာကို ​လေ့​လာသိရှိ​နေကြသူ​တွေက စိုး​ရိမ်မကင်း​ဖြစ်ပြီး​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ တည်​ဆောက်မှုကို အမျိုး​သား​အ​မွေအနှစ်တခု ဆုံး​ရှုံး​ရုံမျှမက လတ်တ​လောနဲ့​ အနာဂတ်မှာ အတိဒုက္ခနဲ့​ ရင်ဆိုင်ရမယ့်​ပြည်သူ​တွေဘက်က ရပ်တည်​ပြောဆိုလာကြတာ ​တွေ့​ရပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ဖော်ပြထား​တဲ့​ဆိုး​ကျိုး​တွေဟာ နိုင်ငံအ​နေနဲ့​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာ​ကြောင့်​ ရရှိလာနိုင်မယ့်​ အကျိုး​အမြတ်နဲ့​ နှိုင်း​ယှဉ်ရင် အကျိုး​အမြတ်က ပိုကြီး​တယ်လို့​ မြန်မာအစိုး​ရရဲ့​ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး​ ဦး​ဇော်မင်း​က ရှုမြင်သုံး​သပ်ပြီး​ ဆည်တည်​ဆောက်​ရေး​ကို ဆက်လုပ်သွား​မယ်လို့​ ​ပြောကြား​ခဲ့​ဟန်တူပါတယ်။
“ဧရာဝတီမြစ်​ရေရဲ့​ ၇ % နှုန်း​ကိုသာ ယူတာပါ၊​ အဲ့​ဒီ ၇ % ခိုင်နှုန်း​ကလည်း​ ​ရေအား​လျှပ်စစ်လည်ပတ်ပြီး​ရင် မြစ်ထဲပဲ ပြန်စီး​ဝင်မှာဖြစ်လို့​ ဆည်တည်​ဆောက်တာဟာ မြစ်ကို ဘယ်လိုမှ မထိခိုက်ပါဘူး​” လို့​ ဦး​ဇော်မင်း​က ​ချေပ​ပြောဆိုခဲ့​တယ်။ “ဘီလူး​ချောင်း​ကြီး​က​နေ ​ရေအား​လျှပ်စစ်ထုတ်ယူလာခဲ့​တာ ၅၂ နှစ်ရှိပြီ၊​ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့​ပါဘူး​” လို့​လည်း​ နှိုင်း​ယှဉ်ပြခဲ့​တယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ မြန်မာအစိုး​ရဘက်ကလည်း​မရည်ညွှန်း​သလို အစိုး​ရရဲ့​ မြစ်ဆုံဆည်တည်​ဆောက်မှုကို ​ဝေဖန်ကန့်​ကွက်ကြတဲ့​ ပြည်သူ​တွေလည်း​ ​မေ့​နေတဲ့​ အချက်တခုရှိပါတယ်။ အဲဒါက​တော့​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာရဲ့​ အထက်ဘက် ​မေခနဲ့​ မလိခမြစ်​တွေ​ပေါ်က ​နောက်ထပ် ​ရေကာတာ ၆ ခု တည်​ဆောက်မယ့်​ စီမံကိန်း​တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်း​တွေက​ရော ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့​ အသက်​သွေး​ကြောဖြစ်တဲ့​ မြစ်နှစ်သွယ်ရဲ့​ ​ရေဆင်း​အား​ကို အဆင့်​ဆင့်​ထိန်း​ချုပ်ကြတဲ့​အတွက် ဧရာဝတီမြစ်​ရေစီး​နှုန်း​ကို နည်း​ပါး​မသွား​စေနိုင်ဘူး​လား​။
မေခမြစ်​ပေါ်က ​ရေအား​လျှပ်စစ်စီမံကိန်း​ ၅ ခု တည်​ဆောက်မှာဖြစ်ပြီး​ မီဂါဝပ် ၂,၈၀၀ ရှိတဲ့​ ချီ​ဗွေ (Chibwe) ၊​ မီဂါဝပ် ၂,၇၀၀ ရှိတဲ့​ ​ခေါင်လန်ဖူး​ (Kawanglangphu) ၊​ မီဂါဝပ် ၂,၀၀၀ ရှိတဲ့​ ဖီ​ဇော (Pisa) ၊​ မီဂါဝပ် ၁,၈၀၀ ရှိတဲ့​ ဝူ​ဆောက် (Wusok) နဲ့​ မီဂါဝပ် ၁,၂၀၀ ရှိတဲ့​ ယီနန် (Yenam) နဲ့​ မလိခမြစ်​ပေါ်မှာ မီဂါဝပ် ၁,၉၀၀ ရှိတဲ့​ လိုင်ဇာ (Laiza) ​ရေအား​ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မည့်​ ​ရေကာတာများ​ တည်​ဆောက်မှာဖြစ်ပြီး​ အဲ့​ဒီမြစ်နှစ်သွယ်ဆုံဆည်း​ရာ မြစ်ဆုံရဲ့​ ​အောက်ဖက် ၅ ကီလိုမီတာခန့်​အကွာမှာမှ အခုအငြင်း​ပွား​စရာဖြစ်လာတဲ့​ မီဂါဝပ် ၄,၁၀၀ ရှိတဲ့​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာကို တည်​ဆောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး​ပြောတဲ့​ မြစ်​ရေရဲ့​ ၇% ပဲယူတာပါဆိုတာ အထက်က ဆည် ၆ ခု မပြီး​ခင် ​မေခနဲ့​ မလိခ မြစ်နှစ် စင်း​က စီး​ဝင်လာတဲ့​ ​ရေဆင်း​နှုန်း​ရဲ့​ ၇ % နှုန်း​ကို ​ပြောတာလား​၊​ ဒီဆည် ၆ ခု တည်​ဆောက်ပြီး​နောက်ပိုင်း​ ​ပြောင်း​လဲသွား​နိုင်တဲ့​ ​ရေဆင်း​နှုန်း​အ​ပေါ်မှာ တွက်ချက်​ပြောတာလာဆိုတာ ရှင်း​ရှင်း​လင်း​လင်း​မသိရတဲ့​ ​ပျောက်​နေတဲ့​ ကွင်း​ဆက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့​ ​မေခနဲ့​ ​မေလိခမှာ ဆည် ၆ ခုတည်​ဆောက်ပြီး​ ​ရေဆင်း​နှုန်း​နည်း​သွား​လို့​ ဧရာဝတီ မြစ်ထဲ ​ရေစီး​ဝင်မှု ပိုပြီး​နည်း​ပါး​သွား​တာနဲ့​ကြုံရရင် မြစ်ဆုံ​ရေကာတာက လိုအပ်တဲ့​ရေကို ၇% ထပ်ပိုယူခဲ့​ရင် ဘာ​တွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး​ အစဉ်ထာဝရ ရှင်သန်စီး​ဆင်း​နေတာကို ​တွေ့​မြင်လိုသူအား​လုံး​ ဧရာဝတီမြစ်ကို ကယ်တယ်ဖို့​ ကြိုး​ပမ်း​ကြသူအား​လုံး​ ဂရုပြုသင့်​တဲ့​အချက်က မြစ်ဆုံ​ရေကာတာတခုကိုသာ အာရုံစိုက်တာထက် မြစ်ဆုံရဲ့​ အထက်ဘက်မှာ တည်​ဆောက်မယ့်​ ​ရေအား​လျှပ်စစ်စီမံကိန်း​ ၆ ခုကိုလည်း​ စနစ်တကျ​လေ့​လာ သု​တေသနပြုသင့်​ပါတယ်။
နိုင်ငံ​တော်အစိုး​ရအ​နေနဲ့​လည်း​ မြစ်ဆုံ​ရေကာတာတည်​ဆောက်​ရေး​အ​ပေါ် ကန့်​ကွက်​ဝေဖန်​နေမှုအ​ပေါ် ဖျက်လိုဖျက်ဆီး​ လုပ်ကြတယ်လို့​ သ​ဘောမထား​သင့်​ဘဲ ဒီမိုက​ရေစီအစိုး​ရတရပ်ရဲ့​ စံနှုန်း​တွေနဲ့​အညီ ပြည်သူ​တွေရဲ့​ စိုး​ရိမ်မှုကို အ​လေး​ထား​ပြီး​ စီမံကိန်း​ဆိုင်ရာ သတင်း​အချက်အလက်များ​ကို ပြည်သူလူထုက လက်လှမ်း​မီ ​လေ့​လာနိုင်​အောင် ပွင်း​လင်း​မြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်​ပေး​သင့်​ပါတယ်။ အဲဒါမှသာ ပြည်သူနဲ့​ အစိုး​ရ ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်တဲ့​ နိုင်ငံဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ ဖြစ်မှာပါ။
Posted by တီချမ်း at 11:27 AM6comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:05 PM 12 comments: Links to this post